Prince Charles omits Myanmar from Asia tour amid Rakhine conflict - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Oct 04 2017 02:19 AM
Myanmar visit was considered for prince’s trip on behalf of British government but it has now been left put of official program.
Prince Charles will tour south-east Asia and India later this month but the heir to the British throne will not visit Myanmar, afteraspate of violence and allegations that authorities are carrying out ethnic cleansing.
ဗြိတိသျှအစိုးရကိုယ်စား ဗြိတိန်မင်းသား က မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ဖို့စဉ်းစားထားသော်လည်း ယခုအခါ တရားဝင်ခရီးစဉ်စာရင်းမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုလကုန်တွင် လာရောက်မည့် အာရှခရီးစဉ်အတွင်း ဗြိတိန် အိမ်ရှေ့မင်းသား ချားလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်လည်ပတ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်နေသော စွပ်စွဲမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။
Also tagged with one or more of these keywords: Prince, Visit
Pope may travel to Bangladesh, Myanmar
Started by BurmeseNews , 29 Jul 2017 Pope, Visit
Myanmar and more
Started by BurmeseNews , 21 May 2017 visit, opinion